Ancelotti Oo Garan Waayey Cidda Leh AC Milan, Kana Hadlay Inuu Tababare U Noqonayo Xulka Qaranka Italy | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Ancelotti Oo Garan Waayey Cidda Leh AC Milan, Kana Hadlay Inuu Tababare U Noqonayo Xulka Qaranka Italy
(04-12-2017) Tababaraha caanka ah ee Carlo Ancelotti ayaa ka hadlay mustaqbalkiisa, waxa uu ka yeelayo haddii loogu yeedho xulka Qaranka Talyaaniga, dhibaatada haysata qarankiisa iyo arrimo kale oo la xidhiidha kooxdiisii hore ee AC Milan.
Ancelotti oo waraysi siiyey idaacadda RAI, ayaa waxa uu sheegay inuu doonayo inuu kusoo laabto shaqada tabarenimada oo uu ka maqnaa tan iyo markii laga casilay Bayern Munich.
“Waan jeclaan lahaa inaan kusoo laabto tababarka naadiyada. Xulka qaranka? Waa shaqadaydii oo aan isbeddel ku sameeyey, laakiin dhibaatada haysata kubadda cagta Talyaaniga, ilama aha inaan xallin karayo, sababtoo ah waa dhibaato ka timid xidhiidhka kubadda cagta.” Sidaas ayuu yidhi Ancelotti.
Tababarahan ruug caddaaga ah oo guulo badan la gaadhay AC Milan wakhtigii uu macallinka u ahaa, ayaa waxa uu xusay in aanu garanaynin cidda iska leh mulkiyadda kooxdiisa hore, isla markaana aanu jirin wax xidhiidh ah oo uu la leeyahay, waxaanu yidhi: “Waligay lamaan hadal madaxweynaha cusub ee Milan, wax xidhiidh ahna lama lihi maamulka cusub. Xataa ma garanayo qofka ah mulkiilaha rasmiga ah ee AC Milan.”
Ancelotti oo wax laga weydiiyey dhibaatada haysata kubadda cagta Talyaaniga oo hoos u sii dhacaysa, taas oo dhaxalsiisay inay ka hadhaan koobka adduunka, waxa uu ku jawaabay: “Ma taagnin meeqaamkii aanu ka joognay Yurub. Waa meerto nasiib darro ah. Kubadda cagta Talyaaniga waxa haysata dhibaato uu xallin karayo xidhiidhku. Waxa loo baahan yahay in la horumariyo carruurto, shuruuc loo dejiyo, isbeddellona la sameeyo. Xaqiiqadu waxay tahay, nasiib-darro, ciyaartooyada wanaagsan maalin walba ma dhashaan.”
Ancelotti waxa uu caddeeyey in maamulka sare ee ciyaaraha Talyaanigu uu la soo xidhiidhay, balse uu siiyey jawaab ah in dalku u baahan yahay xidhiidh ciyaareed oo adag, diiraddana la saaro kooxaha.
Ugu dambayn waxa uu shaaciyey in aanu kusoo laaban doonin tababaridda kooxaha oo uu dibedda ka joogi doono illaa bisha June, sida uu dhigayo heshiiskii uu kula jiray Bayern Munich oo dhowaan uu ka tegay.